यी ज्योतिषको भविष्यवाणी के होला ? अर्जेन्टिनाले जित्ला त विश्वकप ?
रसियामा जारी २१ औ संस्करणको विश्वकपमा आज आइसल्याण्ड र अर्जेन्टिना आमने सामने गर्दैछन् ।
के मेस्सीबारे ज्योतिषहरुले गरेको भविष्यवाणी पुरा होला !
एजेन्सी । कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा चिलीसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएपछि अर्जेन्टिनाका स्टार मेस्सीले अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने घोषणा गरे ।
चितवनमा अर्जेन्टिना समर्थकको -यालीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप
काठमाडौं । चितवनको भरतपुरमा शनिबार नेपालस्थित अर्जेन्टिना समर्थकहरुले निकाल्न लागेको र्यालीमा प्रहरीले रोक लगाएको छ । शनिबार दिउँसो विरेन्द्र क्याम्पसमा भेला भएका समर्थकहरु अर्जेन्टिनाको जर्सी र झण्डासहित बजार परिक्रमा गर्न लाग्दा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको हो ।